Warshad samaysa tuubooyinka oo laga furay magaalada Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeBusinessWarshad samaysa tuubooyinka oo laga furay magaalada Garoowe
July 30, 2019 Puntland Mirror Business, Puntland, Somalia 0
Warshada soo saari doonta tuubooyinka ee laga furay Garoowe. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Warshad samaysa tuubooyinka ayaa maanta oo Talaado ah laga furay magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland.
Abshir Cabdullaahi Diiriye oo kamid ah masuliyiinta shirkada ayaa sheegay in ay soo saari doonto tuubooyinka caaga ah ee loo adeegsado biyo galinta, beeraha iyo waxyaabo kale oo badan.
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka qayb galay munaasabada xarig ka jarka ayaa sheegay in shirkada ay kaalin weyn ka qaadan doonto dhaqaalaha Puntland gaar ahaan shaqaalaysiinta.
“Marka u horaysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii maalgalinta ku sameeyey warshadan maanta halkaan lagu daahfuray oo aan rajaynaayo in ay wax badan qayb ka noqondoonto horumarka dalka ka socda.” Ayuu yiri madaxweynuhu.
Deni ayaa sheegay in dowladda Puntland ay soo dhaweyn doonto cid walba oo maalgashi ku samaynaysa dalka, waxaana uu intaas ku daray in dhawaan magaalada Garoowe lagu qaban doono shir ku saabsan maalgashiga oo lagu soo bandhigayo fursadah maalgashi ee ka jira deegaanada Puntland.
Warshadan ayaa ah tii ugu horeysay oo nooceeda laga furo Puntland, sida ay sheegeen masuuliyiintu.
March 11, 2020 Huteel cusub oo laga furay Garoowe
Garowe police arrest wanted man for rape in Galdogob district
Garowe-(Puntland Mirror) Garowe police on Monday arrested one of the local boys who raped 16-year old girl in Galdogob district last month, Garowe police commissioner Mohamoud Muse Bile also called (Fardaful) told Puntland Mirror over [...]